4.0" Quad-core + Slim
5.0" Quad-core + Slim
အောက်ပါလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် MPT ဖုန်းများဝယ်ယူရန်လည်းကောင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ဆိုင်လိပ်စာများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
MPT ဖုန်းပြု ပြင်နိုင်သော Service Center များ
၁။ MPT Co-Branded Handsets ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးပါလဲ။
MPT CO-Branded handsets နှစ်မျိုးရှိပါတယ်၊ M40 နှင့် M50 ပါ။
M50 ဖုန်းကို ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ဝယ်ယူခဲ့ပါက သင် MPT နံပါတ်အလှ SIM Card တစ်ခုကို အခမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ MPT SIM card အခမဲ့နှင့်အတူ တစ်လလျှင် ၃ဝဝဝကျပ်ငွေဖြည့်ရုံဖြင့် အင်တာနက် ၂.၅ ဂစ်ဂါဗိုက်အသုံးပြုခွင့်ရပါမည် (ပထမလအပါအဝင်)။ အဆိုပါ ၂.၅ ဂစ်ဂါဗိုက် အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်က တစ်လတစ်ခါဖြင့် ၆လတိတိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
M40 ဖုန်းကို ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ဝယ်ယူခဲ့ပါက သင် MPT SIM Card တစ်ခုကို အခမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ MPT SIM card အခမဲ့နှင့်အတူ တစ်လလျှင် ၁ဝဝဝကျပ်ငွေဖြည့်ရုံဖြင့် အင်တာနက် ၇၇၇ မီဂါဗိုက် ဗိုက်အသုံးပြုခွင့်ရပါမည် (ပထမလအပါအဝင်)။ အဆိုပါ ၇၇၇ မီဂါဗိုက် အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်က တစ်လတစ်ခါဖြင့် ၆လတိတိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့် ကို ဘယ်အချိန်အထိရမှာပါလဲ။
အကယ်၍ MPT အသုံးပြုသူသည် ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုသို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးသောအခါမှ ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ရယူလိုက်ပါ အဆိုပါ ၇၇၇ မီဂါဗိုက်ထဲမှ ကျန်ရှိသောမီဂါဗိုက်ကိုအင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ကို ဆက်လက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲလိုက်ရင်ရော ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်ပါလဲ။
အကယ်၍ MPT အသုံးပြုသူသည် ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုသို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးသောအခါမှ ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ရယူလိုက်ပါ အဆိုပါ ၇၇၇ မီဂါဗိုက်ထဲမှ ကျန်ရှိသောမီဂါဗိုက်ကို အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ကို ဆက်လက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အဆိုပါအခမဲ့ရရှိသော ဒေတာက ဘယ်တော့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာလဲ။
အဆိုပါ ၂.၅ ဂစ်ဂါဗိုက် နှင့် ရရရမီဂါဗိုက်သည် ပေးထားသောရက်မှစတင်၍ ရက်ပေါင်း၃ဝသက်တမ်းရှိပါတယ်။
ASEAN & 8 Country Code Region SMS Local Call Calls to Myanmar Call to 3rd country All Incoming Calls Ks/MB (Data)
1. Bangladesh 880 E Asia & India 400 900 1000 1500 700 –
2. Cambodia 855 ASEAN 400 900 1000 1500 700 –
3. Hong Kong 852 E Asia & India 400 900 1500 1500 700 –
4. India 91 E Asia & India 400 900 1000 1500 700 2500
5. Indonesia 62 ASEAN 400 900 1000 1500 700 –
6. Japan 81 E Asia & India 400 900 1000 1500 700 2500
7. Malaysia 60 ASEAN 400 900 1000 1500 700 500
8. Philippines 63 ASEAN 400 900 1000 1500 700 –
9. Singapore 65 ASEAN 400 900 1000 1500 700 2500
10. South Korea 82 E Asia & India 400 900 1000 1500 700 2500
11. Thailand 66 ASEAN 400 500 500 1500 300 500
Billing/Top UpNetworkMarketingPromotionsProducts & ServicesHandsets & SettingHandsets & SettingInternation ServicesSales & DistributionB2B/B2C/PSTN/ADSL/FTTxSuggestions & FeedbackOthers